Ama-orichteropes ase-Afrika ahlupheka ngokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ama-orichteropes ase-Afrika ahlupheka ngokushintsha kwesimo sezulu
Njalo lapho sicabanga nge-Afrika, ngezwekazi elibhekwa njengeCradle of Humanity, izithombe zogwadule olukhulu lwaseSahara, oluhlala engxenyeni enkulu yensimu, ngokushesha zifika engqondweni, noma ngamakati, afana namabhubesi, bathatha wonke amakhona omthunzi abawatholayo.
Yebo, ukucabanga nge-Afrika kucabanga ngamazinga okushisa aphezulu. Amanani adlula ama-50 degrees Celsius cishe nsuku zonke. Kodwa-ke, uma besikholelwa ukuthi isimo ngeke sisaba sibi ... besinephutha kakhulu. Ukuguquka kwesimo sezulu nakho kudala umonakalo omkhulu ezilwaneni zasendle zase-Afrika, njenge-African Orichteropos.
Kuncane kakhulu okwaziwayo ngalezi zilwane, kepha uma singasheshi singagcina sizilahle masinyane kunokuba noma ngubani angacabanga. Futhi yilokho, inani lala mafutha, enobuso obuhle, iya ngokuya ngokwandayo ngenxa yokwehla kwemvula nokuntuleka kokudla.
Isomiso esigadla oGwadule iKalahari, indawo ehlala labo okuthiwa yizingcwenga, futhi siyindawo yezinambuzane ezakha ukudla kwazo: izintuthwane nomuhlwa, okunenkinga yokujwayela indawo eshisa kakhulu. Ngenxa yalokho, ama-orichteropos ayanyamalala.
Uprofesa we-Physiology u-Andrea Fuller uthe izilwane zasebusuku zizama ukonga amandla ngokufuna izinambuzane emini, kepha imizamo yokuzivumelanisa nezimo ayizisizi kangako. Kulaba abayisithupha abebebhekwe unyaka, abayisihlanu batholwa sebeshonile. Izinga lokushisa komzimba wakhe lehle lafika kuma-25 degrees Celsius, lapho kujwayelekile ukuthi babe ngaphansi nje kuka-37ºC.
I-Los abacwaningi Bakwazile ukuthola ukuthi ezinye izilwane ezihuquzelayo, izinyoni, nezinye izilwane seziqalile ukusebenzisa imingxuma ye-anteater, ukuze izidleke ezinoboya ziphele ngokudabukisayo izindawo zokukhosela ezitholakalayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ama-orichteropes ase-Afrika ahlupheka ngokushintsha kwesimo sezulu
Ukungcoliswa kwemvelo emhlabeni wonke kufinyelela emazingeni angenakusimama